Vaovao - Ahoana no hisafidianana ny akanjo ivelany tsara indrindra?
Mivoaka amin'ny ririnina, tontolo iainana samihafa, fotoana samy hafa, lalana samihafa, vanim-potoana samihafa, safidy akanjo ivelany dia samy hafa. Ka ahoana no safidinao?
1. Hahafehy ireto fitsipika telo ireto
Avy ao anatiny ka hatrany ivelany, dia ireto: sosona hatsembohana-sosona hafanana-velarantany. Amin'ny ankapobeny, ny sosona mifintina amin'ny hatsembohana dia akanjo lava na t-shirt haamaina haingana, volon'ondry ny sosona hafanana, ary palitao na palitao midina ny sosona entin'ny rivotra. Ny collocation mety amin'ny 3 sosona dia afaka manome fahafaham-po ny ankamaroan'ny hetsika fizahantany any ivelany. Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay dia nisy palitao softshell vaovao nipoitra. Safidy tsara ihany koa io, ary manana ny mampiavaka ny hafanana sy ny rivotra ihany koa. Afaka mitafy iray hafa ianao.
2. Safidio ny fitafianao mifanaraka amin'ny ora sy ny làlana
Ny fitsipiky ny akanjo sosona telo no fitsipika fototra indrindra amin'ny fanatanjahan-tena amin'ny ririnina. Ho fanampin'izay, ny akanjo dia tokony ampiana ara-potoana arakaraka ny tena zava-misy. Raha handeha hitsangatsangana lava ianao, dia makà palitao midina. Rehefa mandeha eny amin'ny ferry ianao dia mety tsy mahatsiaro mangatsiaka be noho ny hatsembohana, fanatanjahan-tena ary hafanan'ny vatana. Amin'izao fotoana izao dia aza mitafy palitao mandra-pialanao sasatra eny an-dalana na amin'ny lasy hitandrina ny hafanana.
3. Misafidiana akanjo mety amin'ny sokajin-taona samihafa
Tsy mitovy ny fomba fitafin'ny olona amin'ny taona samy hafa rehefa mivoaka. Rehefa manao fanatanjahan-tena any ivelany ny zokiolona dia tsy maintsy manao sosona betsaka araka izay tratra mba hafana. Ny akanjo maro sosona dia manana fahaizana mitahiry hafanana matanjaka kokoa noho ny akanjo sosona tokana. Ho fanampin'izany, afaka manaisotra akanjo maromaro izy ireo rehefa mahatsapa mafana mandritra ny fanatanjahan-tena. Raha tsy te-hitafy akanjo maromaro ianao dia afaka misafidy volon'ondry miampy palitao fanatanjahan-tena roa na palitao mitafo rivotra. Miezaha tsy manao akanjo ba sy palitao mandritra ny fanatanjahan-tena any ivelany, satria ny akanjo ba mafana dia tsy mora maina amin'ny rano ary mavesatra. Akanjo mafana dia mafana fa tsy afaka miaina.
Ny ankizy dia tsy mila manao atin'akanjo mafana matevina amin'ny sosona anatiny ivelany. Ny atin'akanjo landihazo mahazatra dia ampy. Ny sosona mafana dia azo alaina amin'ny palitao cashmere + cashmere vest na palitao kely misy paty.